Imbotyi emhlophe, isobho kunye neprawn | Ukupheka kweKhitshi
Ubhontshisi omhlophe, isobho kunye neprawn
UMaria vazquez | 27/03/2021 10:00 | Izitofu kunye neesobho zokupheka
Iisobho zeLegume ziluncedo olukhulu ngeenyanga ezibandayo zonyaka ukufudumala. Nangona kufuneka ndivume ukuba, njengakwi-stews, ekhaya asiyi kuyeka ukuwathatha nangaliphi na ixesha lonyaka. Le bhontshisi imhlophe, isobho kunye neprawn ngumzekelo wazo.
Umdibaniso we iimbotyi ezimhlophe kunye neempundu Enye yezintandokazi zam. Ukuba sidibanisa isiseko esihle semifuno kunye netswele, ipepile ngakumbi i-leek njengabaphambili, impumelelo iyenziwa. Entle Isitokhwe sentlanzi Ngaphandle kwamathandabuzo ndinganegalelo ekuphuculeni le suphu, kodwa ndihlala ndihamba ukuze ndenze lula kubomi bam bemihla ngemihla.
Into endiyenzileyo, ukuze ndisebenzise lonke incasa yeeprawn kukufrys iigobolondo zabo ukufezekisa isiseko seoyile, enencasa. Lumka ukuba uneekati, kuba ngelixa upheka esi sidlo abasayi kuyeka ukuzama ukutsiba ekhawuntarini. Lowo ulumkisayo akangomngcatshi. Zama le supu kwaye undixelele!
Le bhontshisi imhlophe, isobho kunye ne-prawn yinyani eyinyani njengekhosi yokuqala okanye isidlo sangokuhlwa ngexesha lonyaka xa ubusuku busabanda.
Uhlobo lweRipeipe: Iisobho
I-180 g. iimbotyi ezimhlophe zezintso, eziphekiweyo (ezomileyo)
Iipunipoli ezi-3 zeoli yeoli
Pepper ipepile ebomvu
Iipuniwe ezi-2 zeetomato sauce
Icephe elimnandi paprika
1 ityhubhu yesitokhwe sentlanzi (ukhetho)
Sinqunqa itswele, iipepile kunye neelike kwaye uxobule i-prawns, ugcine amaqokobhe kwelinye icala kunye nenyama kwelinye.
Sitshisa ioyile epanini kwaye susa iigobolondo ze-shrimp ukunambitha ioyile imizuzu emibini. Emva koko sisusa ngesipuni esitshiweyo.
Kwioli efanayo, ngoku faka itswele, iipepile kunye neeliki ezinqunqiweyo imizuzu eli-10.
Ke Yongeza iiproni Qhotsa de bathathe umbala.
Emva sidibanisa utamatisi othosiweyo , iipaprika ezimnandi kwaye uxube yonke.
Sifaka iimbotyi, ityhubhu yesitokhwe kunye namanzi (kwimeko yam amanzi okupheka eembotyi kwimbiza ekhawulezayo) kwaye azise emathunjini. Emva koko siyehlisa ubushushu kwaye sipheke imizuzu emihlanu.
Sikhonza imbotyi emhlophe, isobho kunye ne-prawn ishushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Izitofu kunye neesobho zokupheka » Ubhontshisi omhlophe, isobho kunye neprawn
Isipinatshi, iavokhado kunye nesaladi yeapile
I-piquillo pepper kunye ne-tuna isaladi